» Amisom oo Sheegtay in Ciidan dambe oo Soomali ah aan tababar dibada loogu qaadi doonin
Amisom oo Sheegtay in Ciidan dambe oo Soomali ah aan tababar dibada loogu qaadi doonin
Jan 11, 2013 - jawaab	Aqrisatay:1781Ciidamada amisom ee kusugan gudaha dalka somaliya ayaa shaaciyay in ciidan dambe ee soomali ah aan tababar logu qadi doonin dibada oo ay iyagu siinayaan tababaro buuxa
Afhayeenka Ciidamada AMISOM Col. Cali Aadan Xumad oo maanta shir jaraa’id ku qabtay Xarunta xalane ee Taliska AMISOM ayaa ka warbixiyay waxyaabihii u qabsoomay sanadkii ore, isagoo sheegay in guul weyn oo la taaban karo ay gaareen.
Isagoo ka hadlayay qaabkii howl galada AMISOM uga bilowdeen gudaha Soomaaliya ayuu sheegay in markii hore si qunyar socod ay ku bilowdeen, hase ahaatee sanadkii la soo dhaafay ay qaadeen tallaabooyin muhiim ah, ayna gaareen horumaro muuqda.
“Howl galka wuxuu markii hore ahaa mid si qunyar socod ku socday, laakiin waxaa is bedel uu yimid sanadihii u dambeeyay, markii howl galka AMISOM uu ku baahay meelo ka baxsan Muqdisho, haatan howl galada meel wanaagsan ayay marayaan”ayuu yiri Col. Xumad.
Col. Cali Aadan ayaa sheegay in howl galka AMISOM uu si dar dar ah uga socdo qeybo ka mid ah gobolada dalka, waxaana uu tilmaamay in sanadkan qorshahooda yahay inay xasiliyaan wadada isku xirta Muqdisho iyo Baydhabo.
“Sanadkan waxaa AMISOM u qorsheysan inaan sugno ammaanka wadada isku xirta Baydhabo iyo Muqdisho, balse hada waxaa ku howlanahay xasilinta Muqdisho iyo Afgooye”ayuu yiri Col. Cali Aadan Xumad.
Dhinaca kale Afhayeenka AMISOM ayaa sheegay in wixii hada ka dambeeyay Ciidamada dowladda lagu tababari doono gudaha dalka, isla markaana aan loo qaadi doonin dalka dibadiisa.
“Ciidamada dowladda wixii hada ka dambeeya waxaa lagu tababari doonaa gudaha dalka, halkii markii hore dibada tababaro loogu furi jiray, waxaa jiri doonta saraakiil xirfado ku soo qaadan doona dalka dibadiisa”ayuu yiri Afhayeenka AMISOM.
Howl galka AMISOM oo bilowday sanadkii 2007-dii, ayaa markii hore qorshihiisa ahaa nabad ilaali, balse markii dambe isu bedelay nabad dhaliyeyaal, iyadoo haatan Soomaaliya ay joogaan in ka badan 17-kun askari ka kala socda ilaa afar dowladood.